Leaveacomment Uncategorized တောင်တွင်းကြီးမြို့အနီးမှ တောင်များနိမ့်ဆင်းခြင်းနှင့် မြေပြင်မြင့်တက်ခြင်း ဖြစ်စဉ်များ
Leaveacomment Uncategorized အားအလွန်ကောင်းသော “Tropical Cyclone 04B GIRI” အား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
2 comments Uncategorized ၂ဝ၁ဝ မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုအပေါ် ဦးထွန်းလွင်၏ သုံးသပ်ချက်
By mmweather.ygn, on September 22nd, 2010%
“လာနီညာရာသီဥတုရဲ့ သက်ရောက်မှုကို မြန်မာပြည်တွင်ကြုံတွေ့နေရပြီလား၊ လာနီညာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒေသဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဝေးကွာတဲ့အတွက် အားကောင်းတဲ့ လာနီညာဖြစ်မှသာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရာသီဥတုအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လာနီညာအားကောင်းတဲ့ ကာလများဟာ ၂ဝ၁ဝ နိုဝင်ဘာလက စတင်ပြီး ၂ဝ၁၁ ဖေဖေါ်ဝါရီလအထိ ဖြစ်ပါမယ်။ လက်ရှိကာလမှာ ဖစိဖိတ်ဒေသနဲ့ အင်ဒိုချိုင်းနားဒေသ အပေါ် လာနီညာရာသီဥတု အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ လာနီညာဟာ ပိုမို အားကောင်းလာနေတာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ်မှာလည်း လာနီညာရဲ့ တိုက်ရိုက် အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကို တစ်စတစ်စ ကြုံတွေ့ရစပြုနေပြီဖြစ်ပါတယ် …” ဟု ဒေါက်တာ ဦးထွန်းလွင် အစချီပြီး ရေးထားသော “မမျှော်လင့်တဲ့ ရာသီဥတုတွေ ဖြစ်နေတာကိုက ဒီကနေ့ ရာသီဥတု ဖြစ်နေပါတယ်” ဆိုသည့် “၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် . . . → Read More: ၂ဝ၁ဝ မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုအပေါ် ဦးထွန်းလွင်၏ သုံးသပ်ချက်
Leaveacomment Uncategorized ၁၉၃ဝ ပြည့်နှစ် ပဲခူးမြေငလျှင်ကြီး
3 comments Uncategorized မတူညီသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ၂ ခု အကြောင်းနှင့် ကောလဟာလ
By mmweather.ygn, on August 30th, 2010%
May 22, 06:04 PM နေ့တွင် MMW NEWS တွင်တင်ပြခဲ့သည့်ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည် …
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း LAILA ဟာ အခုဆိုရင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အန်ဒရာပရာဒေ့ရ်ှကမ်းခြေကို ဖြတ်ကျော်တိုက်ခတ်ပြီး ကုန်းတွင်းမှာ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ်နဲ့ တဖြည်းဖြည်းအားပျော့ပျက်ပျယ်သွားတော့မယ်လို့ ခန့်မှန်းချက်များအတိုင်း၊ ၂၃ ရက်နေ့ မှာ လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတော့မှာပါ။
၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်မှာ ပထမဦးဆုံးစဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း LAILA ဟာ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်မှာ ပထမဦးဆုံးပဲ စဖြစ်ခဲ့ပြီး ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသက လူများစွာရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပေါင်း မြောက်များစွာကို ဖျက်ဆီးသွားခဲ့တဲ့ NARGIS လို မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာ ရိုင်ရိုင်းစိုင်းစိုင်းဆက်ဆံမသွားခဲ့ပဲ သူ့ကြောင့် ပူလောင်နေတဲ့ဒဏ်ကနေ အထိုက်အလျှောက်လွတ်ကင်းခဲ့ကြရတဲ့အတွက် (အိန္ဒိယနိုင်ငံ အန်ဒရာပရာဒေ့ရှ် ပြည်နယ်မှ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ-လူအများအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပေမဲ့) ဝမ်းလည်းသာ . . . → Read More: မတူညီသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ၂ ခု အကြောင်းနှင့် ကောလဟာလ
One comment Uncategorized “Sinkhole” ဟုခေါ်သော မြေကြွင်းကြီးများဖြစ်ပေါ်မှုကို လေ့လာခြင်း
Jun 3, 02:52 PM (MMW NEWS မှ ပြန်လည်ကူးယူဖေါ်ပြထားပါသည်) http://mmweather.com/news/index.php?id=79
ရိုက်တာသတင်းတစ်ပုဒ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ(၁)ရက်နေ့က ဂွာတီမာလာနိုင်ငံမှာ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း Agatha တိုက်ခတ်အပြီး ရေလွှမ်းမိုးမှုတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် မြေကြွင်းကြီးတစ်ခုပေါ်လာကြောင်း၊ အဲဒီမြေကြွင်းကြီးဟာ ၂၁ မီတာ (၆၉ ပေခန့်)ကျယ်ပြီး၊ ၃၁ မီတာ(ပေ ၁ဝဝ ကျော်) အနက်ရှိတဲ့အကြောင်း သတင်းရေးသားခဲ့သလို Xinhua သတင်းဌာနရဲ့ မက္ကဆီကိုသတင်းထောက်ကလဲ အလားတူသတင်းကို အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာ ပုံတွေနဲ့ အတူရေးသားဖေါ်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဂွာတီမာလာ ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်တပ်က အဲဒီနေရာအနီးဝန်းကျင် မီတာ ၁ဝဝ ပတ်လည်ကို အန္တရာယ်ဇုံအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ ဇွန်လ(၃)ရက်နေ့မှာတော့ အဲဒီ မြေကြွင်းကြီးပတ်ဝန်းကျင်က လမ်းသွယ်တွေကိုပါ တာဝန်ရှိသူတွေက ပိတ်လိုက်ပြီလို့ ဆင်ဟွာသတင်းဌာနသတင်းတစ်ပုဒ်မှာ ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဇွန်လ(၁)ရက်နေ့က . . . → Read More: “Sinkhole” ဟုခေါ်သော မြေကြွင်းကြီးများဖြစ်ပေါ်မှုကို လေ့လာခြင်း
Leaveacomment Uncategorized မုန်တိုင်းရာသီလာတော့မည်-ပြင်ဆင်ထားသင့်သည်
May 3, 01:51 PM (MMW News မှ ပြန်လည်ကူးယူဖေါ်ပြပေးထားပါသည်) http://mmweather.com/news/index.php?id=30
မုန်တိုင်းရာသီနီးလာပြီမို့ မုန်တိုင်းအန္တရာယ်ကင်းဝေးရေး နှင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ရေးအကြံပြုချက်များ ကိုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ မူရင်းဆောင်းပါးဟာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်ပြည်နယ် အတွက် ကိုယ်စားပြုထုတ်ဝေထားတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မဆီလျော်ဘူး ထင်တာတွေကိုတော့ ချန်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုပြောချင်တာက ဟာရီကိန်း၊ တိုင်းဖွန်းနဲ့ ဆိုင်ကလုံး ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေဟာ အပူပိုင်းမုန်တိုင်းတွေကို ပြောတာချင်းအတူတူပါပဲ။ ဒေသအလိုက် အခေါ်အဝေါ်ကွဲပြားသွားတာပဲ ရှိပါတယ်။ အခုဒီဆောင်းပါးဟာ ဗဟုသုတအလို့ငှာ ဘာသာပြန် ပေးရုံသက်သက် ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တမ်း မုန်တိုင်းအန္တရာယ် ဖြစ်လာပြီဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမိုးလေ၀သ နှင့်ဇလဗေဒသတင်းထုတ်ပြန်ချက်များကိုလည်း နားဆင်လိုက်နာဖို့ အထူးလိုအပ်လှပါတယ်။
မူရင်းဆောင်းပါးကို http://www.semo.state.ny.us/info/publicsafety/hurricaneprepare.cfm မှာ ၀င်ကြည့်နိုင်ပါသည်
ဟာရီကိန်းဆိုသည်မှာ . . . → Read More: မုန်တိုင်းရာသီလာတော့မည်-ပြင်ဆင်ထားသင့်သည်